You are at:Home»स्वास्थ्य»मानिसलाई भिटामिन डी किन आवश्यक छ ? यसको कमी हुँदा के हुन्छ ?
By bktnews Posted on	 December 4, 2020 स्वास्थ्य
काठमाडौं । सुस्वास्थ्य अस्पताल वानेश्वरका सञ्चालक सुदर्शन बस्नेत ठोकुवा गर्छन्, ‘यदि स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्ने हो भने काठमाडौंका अधिकांश मान्छेलाई भिटामिन डीको कमी छ ।’ यसो भन्नका लागि उनीसँग केही आधार छन् । विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरुमा उनले भिटामिन डिको कमी भएका पाएका छन् । भिटामिन डी सूर्यको किरण र केही खानेकुराबाट प्राप्त हुन्छ । यी दुवै माध्यमबाट मान्छेहरुले भिटामिन डी लिइरहेका छैनन् ।
भिटामिन डीले हाम्रो शरीरको मांशपेशीहरुलाई पनि बलियो बनाउँछ । यसका साथै यसले शरीरमा आस्टियोकेल्किन नामक प्रोटिनको निर्माणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । भिटामिन डिले हड्डी टुट्नबाट समेत बचाउँछ ।
भिटामिन डीको कमीले महिलाहरुमा धेरै प्रकारका समस्याहरु देखा पर्छन् । अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार भिटामिन डीको कमीले फोक्सोको बनावट तथा दैनिक कामकाजमा नै फरक पर्न सक्छ । भिटामिन डीको कमिले फोक्सोले गर्ने कार्य क्षमतामा पनि कमि आउँछ । यसबाहेक भिटामिन डीको कमीले फोक्सो खुम्चिन्छ । यसले गर्दा श्वास–प्रश्वास प्रकृयामै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
भिटामिन डीको कमीले ढाड तथा कम्मर दुख्न थाल्छ । एउटा अध्ययन अनुसार कम्मर दुखाइबाट पीडित ३ सय ६० जना बिरामीहरुमा भिटामिन डीको स्तर परीक्षण गरिएको थियो । परिणाम, सबै बिरामीहरुमा भिटामिन डीको कमी देखियो । भिटामिन डीको कमीले हड्डीको सतह कमजोर हुन्छ, जसबाट हड्डीसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या देखा पर्न सक्छ ।
शरीरको मध्यभागमा कम्मर हुन्छ र यसले शरीरको अधिकांश भार थामेको हुन्छ । मेरुदण्ड समेत पूर्णरूपले कम्मरमै अडिएको हुन्छ । यदि हाम्रँे शरीरमा भिटामिन डीको कमी छ भने मेरुदण्डले शरीरको भार थेग्न गाह्रो पर्छ ।